Inkastoo inta badan nidaamka kombiyuutarka casriga ordi karaan Adobe jilitaankii baxay sanduuqa, waxaa jira qaar ka mid ah tallaabooyinka ay qaataan, iyo go'aamada ka iman kara in la sameeyo, ka hor inta software ah, ama haddii aad dhisayso ama iibsashada computer cusub si loo hubiyo inaad hesho waayo-aragnimo ugu fiican suurto gal la software ah.
Adobe siiyo sooca ah ugu yaraan loo baahan yahay si uu ugu tartamo Ciyaar ay website halkan , si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la xasuusto tani waa faahfaahinta ugu yar, oo ma aha qasab siin doonaa waayo-aragnimo user lagu qanci karo. Nashqadda talinayaa fog u badan tahay in ay bixiyaan nooca wax-qabadka la filayaa of software iyo kuwa noqon lahaa kuwa si ​​ay u isticmaalaan, isagoo ah hanuuniye u Creech ugu yar ee computer cusub ama casriyaynta kasta oo la qorsheeyey ka hor inta aan loo xirxiro.
Inkastoo software ka ordi doonaa on Intel Core2Duo ama Phenom II AMD processor, waxaa xusid mudan in haya'ad noqon kartaa shaqo heer sare ah oo degdeg ah ee processor iyo processor dhaqsaha badan ee suurtogal gudahood miisaaniyada iskaga bixin doontaa saami in xawaaraha ee tafatirka. Guud ahaan, xitaa Core I3 ah, qiimo jaban oo ka mid ah oo kala duwan Intel hadda, wuxuu noqon doonaa si weyn u dhaqso badan Processor ka weyn, laakiin sababtoo ah jilitaankii si farxad isticmaalaa Processor multi cored in ay ka buuxaan, haddii miisaaniyadda ay gaari karaan in ay muhiimka ah Bawdada ama processor ka badan samayn sidaa darteed, waa Ciyaar goosin ka mid ah software in ka faa'iidaysanaysaa kordhinta awoodda xisaabeed badan ugu.
Tixgelin xigta waa xusuusta. Faahfaahinta ugu yar ayaa soo jeedinaya 4GB Oo Raam oo la 8GB talinayaa, waayo, orodka lagu kalsoonaan karo oo siman fiirsan ugu yaraan 8GB, oo taga, waayo, sida badan ee aad awoodid. Wixii computer ah in loo isticmaalo hawlaha kale, multitasking arki kartaa xitaa 24GB Oo Raam oo la buuxda loo isticmaalay, gaar ahaan haddii aad ka shaqeeya content HD. Isagoo ka hadlayay ee ka kooban, tani waa arrin kale oo xasuusta in ay eegaan. Inkastoo aad u isticmaali karto drive kaydin jiray oo uu ka kooban yahay wax walba oo kale ah on your computer in ay sii warbaahinta aad ka shaqeeya, waayo, raalli HD gaar ahaan, iyo waayo, dhib baa lacag la'aan ah iyo howlgalka dhaqsaha badan ee suurtogal waxaa lagu talinayaa in u leenahay drive hal, la doorbidayo 7200 RPM ah ama si dhakhso ah mid, si gaar ah loogu warbaahinta aad. Xawaaraha iyo jeer waxay ka dhigan tahay helitaanka jilitaankii noqon doonaa si weyn dhakhso hawlgal warbaahinta ay ku wadid u gaar ah.
Qaybta ugu dambeysa ee faahfaahinta si ay u eegaan waa naqshadeynta. Adobe jilitaankii isticmaala feature lagu magacaabo Engine Mercury Radidiyaha in si degdeg ah wax badan oo macaan kuu ogolaanaya in loo maqli karo ee video aan haya'ad, waxa ay leedahay laba hababka, software kaliya iyo qaabka xawaaraha GPU (Isticmaalka labada CUDA ama OpenCL). Hab xawaaraha GPU waxay bixisaa qaab si weyn u kordhay oo sidaas daraaddeed waa mid aad u jecel yahay. Si kastaba ha ahaatee, ma dhan GPU ee la jaanqaadaan Radidiyaha Mercury ah Engine, liiska kuwa laga helo bogga faahfaahinta hore loola xiriiriyay, si haddii computer cusub la dhisayo ama la soo iibsatay, ama dayactirka dhaawaca lagu fikiro ka hor si loo soo dajiyo, waa aadka u jecel yahay in la isticmaali GPU ah socon halka ay suurto gal.
Iyadoo ku qariyeen caddaymaha aasaasiga ah ee computer ah in uu kor u qaado howlaha jilitaankii, hadda waa markii si loo eego goobaha computer ka iyo sida ay taasi saamayn kartaa jilitaankii ee waxqabadka iyo geynta.
Waxa ugu horeeya ee ah in la fahmo waa video tafatirka in, gaar ahaan HD video, waa bandwidth degdeg ah, dhaqan, waxaa ka buuxa ilaa haad u dhexeeya processor, RAM, GPU iyo Hard Drive inta lagu jiro hawlgalka. Faafinta isticmaalka bandwidth in ka badan qalabka dhowr arki kartaa qaab weyn guulaha, sidaas mid ka mid ah hababka ugu fiican ee ugu wanaagsan loo gaarsiiyo computer ee Premier waa la qabsato sida drives adag ayaa loo isticmaalaa. Sidee wax ku ool ah waxa ay noqon kartaa waxay ku xidhan tahay kombiyuutarka aad isticmaasho, sidaa darteed waxaan isku dayi doonaa in aan halkan ku dabool ah fursadaha kala duwan yar.
Haddii aad computer ku jira drive hal, si fudud loo soo dajiyo Ciyaar iyo bilaabeyso isticmaalkeeda, ma jiraan fursadaha lagu heli karaa halkan. Haddii ay jiraan laba drives, sii mid ka mid ah nidaamka qalliinka, barnaamijyada iyo files khasnado. Isticmaal drive labaad si gaar ah loogu files mashruuca video, mashaariicda dhoofiyo iyo xiisaha.
Haddii computer uu leeyahay saddex drives ka dibna sii mid ka mid ah nidaamka qalliinka iyo barnaamijyada, mid labaad ee files mashruuca video, iyo isticmaali saddexaad ee xiisaha, files khasnado iyo mashaariicda dhoofiyo.
Haddii aad qabto helitaanka drives xitaa ka sii badan, ka dibna kala jabeen khasnado ka Falanqeynta ah, oo ay aakhirkii leeyihiin hal baabuur kasta u xiisaha, dhoofinta iyo khasnado. Faafinta files oo dhan drives badan intii suurto gal kor u qaab ay u suurto hawlgallada Akhri / qortaa kala duwan si ay u dhacaan iyada oo aan wax faragelin ah midba midka kale.
Taasi waa aragtida ah, laakiin sidee baad ku gaaraan tan? Tan waxaa loo sameeyey gudahood laftiisa jilitaankii, waxaa jira laba qaybood, helitaanka halkaas oo warbaahinta files khasnado waxaa la geeyaa waxaa loo sameeyaa in kastoo menu edit ah, ka dib markii jidka edit> doorbidida> warbaahinta.
Beddelidda meesha files mashruuca, xiisaha iyo dhoofinta ku kaydsan yihiin waa sida fudud, oo waa la heli via menu mashruuca inay qaadato mashruuca jidka> goobaha mashruuca> scratchdisks.
Marka la jilitaankii shaqeeyo waa muhiim in la leeyihiin goobaha saxda ah ee nooca warbaahinta oo aad isticmaasho iyo dabiiciga ah ee wax soo saarka final. Tan waxaa loo sameeyey gudahood Ciyaar ay shaqo loo yaqaan isku xigxiga.
Ka dib markii la abuuro mashruuc cusub oo aad soo bandhigay sanduuqa wadahadal isugu xigaan. Waxaad heli kartaa isku xigxigta, sida badan ee mashruuca keli ah sida aad jeceshahay, laakiin had iyo jeer loo maleeyo Ciyaar aad u baahan tahay ugu yaraan hal iyo si uu u baahan yahay hal ugu horeeyay ee la abuuray in ay oggolaadaan in shaqo mashruuc. Warbaahinta kasta, audio iyo video labadaba, kaalinta galay isku xigxiga oo waxaa si toos ah loo habeeyey si ay saldhig oo isku xigxiga in, si aad u baahan doontaa in aad doorato goobaha u dhigma warbaahinta asalka intii suuragal ugu dhow. Xigxiga kasta oo mashruuc yeelan karaan goobaha kala duwan haddii loo baahdo, maadaama ay taasi yareysaa culayska ku processor iyo ka dhigaysa nidaamka dhakhso iyo macaan.
Wada hadal isku xigxiga wuxuu leeyahay seddex tabs, Presets iskugu xigxigaan, Settings iyo Tracks
Horena Tab waxa uu ka dhigayaa sameynta isku xigxiga oo cusub oo aad uga fudud. Doorashada horena ah jilitaankii u saamaxaaya in ay doortaan goobaha sida ugu fiican u dhigma video la doortay iyo qaab maqal ah. Waxaa jira tiro balaadhan oo ah presets heli karo si loo waafajiyo noocyada warbaahinta inta badan la isticmaalo, waxay soo abaabulay ku saleysan qaabab camera. Koox kasta gudahood waxaa jira goobo badan oo gaadmada ah uu ka soo xusho ku saleysnaadaan tirada jir iyo interlacing. Inkastoo doorashada horena saxda ah waxay noqon kartaa wax yar niyad jebinaysaa ah in uninitiated ah, hubinta tirada lugahooda halkii labaad, size jir ah iyo codec waa sax waa loo baahan yahay oo dhan.
Marka horena waxaa loo doortay in aad kartaa inaad u guurto tab goobaha si ay ula qabsadaan horena ay gacanta. Qaar ka mid ah goobaha ma noqon doonto hagaajin karo in tab taasi ay sabab u tahay ayna gaarka ah looga baahan yahay warbaahinta debeda.
Sababtoo ah presets samayn sida shaqo fiican ma aha run ahaantii loo baahan yahay si ay ula qabsadaan wax tab goobaha, iyo haddii aad isku dayayaan in ay wax ka qaban gaar ah.
Iyadoo presets caadiga ah waa caadi ahaan ku habboon, oo ku beegnaa tihiin kuwo dooni laga yaabaa in goob caado. Si tan loo sameeyo, horena dooran xigxiga in ku dhow yahay inuu aad warbaahinta ah, ka dibna la sameeyo doorashada caadadii in tab Settings ah. By xulashada doorasho Save horena on tab Settings aad markaas abuuri karaan goob caado la koobin kuwa. Sii horena ugu magac ku haboon in Settings Save the wada hadal iyo ku daro wixii qoraalo ah ee loo baahan yahay in ay yihiin. Horena waxa laga heli karaa galka Custom hoostiisa ku Presets Available.
Kuwa la codec Apple Prores ku kombiyuutarada ay isticmaali karaan sida codec Xiisaha haddii loo baahdo. By doorashada Quicktime sida qaabka Falanqeynta in hab tafatirka caado, iyo ugu dambayntiina Apple Prores sida codec loo baahan yahay.
> Resource > Video > Shuruudaha Adobe jilitaankii System, sida loo sameeyo Computer u jilitaankii